အန်းဒရွိုက်ကို UPDATE လုပ်နည်း - အန်းဒရွိုက် - 2019
အန်းဒရွိုက် update ကို
အနည်းငယ်အရင်းအမြစ်များကိုလူမှုကွန်ရက်၏လူကြိုက်များကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။ VKontakte - အရှိဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးဒေသခံလူမှုကွန်ယက်၏တဦးတည်း။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဤသယံဇာတ developer များအပေါ်ပိုမိုအဆင်ပြေဆက်သွယ်ရေးများကိုအထူးအစီအစဉ်များကိုရေးနှင့်ဘရောက်ဇာမှ-ons တွေကိုထည့်ပါ။ ဤအဖြည့်စွက်တစ်ခုမှာ VkOpt ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မူလကန်ဆောင်မှု VKontakte ထံမှဗီဒီယိုနှင့် download, ဂီတများအတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့သည် VkOpt တိုးချဲ့။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ဒီ script ကိုဒီလူမှုရေးကွန်ယက်စာမျက်နှာအပြင်အဆင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းအပါအဝင်ပိုပိုပြီး functions များ, နေဖြင့်ရှုတ်ထွေး။ ဘယ်လိုအော်ပရာဘရောက်ဇာများအတွက်တိုးချဲ့ VkOpt ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်သိပါစေ။
browser ကို VkOpt Installing
ကံမကောင်းစွာပဲ, အအော်ပရာဘရောက်ဇာကို add-ons တွေကို၏တရားဝင်အပိုင်းမတိုးချဲ့ VkOpt ရှိသေး၏။ ထို့ကြောင့် script ကို download လုပ်ပါမှကျနော်တို့ကိုကိုးကားဤအပိုင်းကိုရဲ့အဆုံးမှာပေးထားသောရန်ဆိုက် VkOpt, သွားရောက်လည်ပတ်ရန်ရှိသည်။
ဒေါင်းလုဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်း, "အော်ပရာ 15+" လို့ခလုတ်ကိုရှာပါ။ ဒါဟာဘရောက်ဇာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်အဆိုပါဖြည့်စွက်နိုင်ရန် link ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့ကအော်ပရာ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ထို့အပြင်မဟုတ်ကတည်းကသို့သော်, frame ကိုအတွက် browser ကိုကျွန်တော်တို့ကို VkOpt install ဖို့တိုးချဲ့မှု Manager ကိုသွားပါသင့်ကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြသသည်။ အောက်ကပုံတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့သည်သင့်လျော်သော button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီလုပ်ပါ။
ယင်း extensions တွေကိုမန်နေဂျာကအတွက်ပြီးတာနဲ့ VkOpt ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူယူနစ်ရှာဖွေနေ။ ၎င်း၏ "Install" တွင်တည်ရှိသောခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
General Settings extension ကို
ထို့နောက် extension ကို activated ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း setting တွင်ပြုလုပ် Deactivate ထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ "Disable လုပ်ထား" ခလုတ်ကိုရှိ၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီမှာကဒီလျှောက်လွှာ, အမှားများကိုစုဆောင်းပုဂ္ဂလိက mode မှာ run နှင့်ဖိုင်ကိုလင့်များမှပွင့်လင်း access ကိုခွင့်ပြုပါရန်, သက်ဆိုင်ရာအပိုဒ်များ၏ရှေ့မှောက်၌စစ်ဆေးမှတ် setting အသုံးပြုပုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ VkOpt လုံးဝဘလောက်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ browser ကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
သငျသညျ VKontakte site ပေါ်တွင်သင့်အကောင့်သို့ log တဲ့အခါမှာတိုးချဲ့၏ installation အတှကျကြေးဇူးတငျကွောငျး, အဖြစ် interface ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ဖို့အဆိုပြုချက်ကိုဖော်ပြတစ်ဦးကြိုဆိုပြတင်းပေါက် VkOpt ပေးထားပါတယ်။ ရုရှားယူကရိနျး, ဘီလာရု, အင်္ဂလိပ်, အီတလီနှင့်တာ: ခြောက်လဘာသာစကားများကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ ကျနော်တို့ရုရှားဘာသာစကား select လုပ်ပါ, နှင့် "အိုကေ" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်သည်အခြားဘာသာစကားတစ်ခု interface ကိုရှိသည်ဖို့ပိုနှစ်သက်လျှင်မူကား, သင်ကရွေးနိုင်သည်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ဒီ site ကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုမီနူးထဲမှာတိုးချဲ့၏ installation ပြီးနောက်: က VkOpt ဖိုရမ်တစ်ဦးကိုကိုးကားအပါအဝင်အသစ်သောပစ္စည်းများ, အများကြီးထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မီနူး drop-down စာရင်း၏ပုံစံကိုယူခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့် advanced settings စေ, ဒီ Menu ထဲမှာ "ကျနော့် Settings" ကိုသွားပါ။
ထို့ပြင်ယင်း setting များကိုစာရင်းထဲတွင်ပေါ်လာသော window ထဲတွင်အလွန်အဆုံးတွင်တည်ရှိပြီးသော VkOpt အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ငါတို့ရှေ့မှာချဲ့ထွင် VkOpt မီဒီယာ tab ကို setting ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့သင်တို့သင့်တော်တဲ့ item ပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းကလစ်သူတို့နှင့်အတူပိတ်ထားနိုင်ပေမယ့်, ကို default ကဒီမှာအများကြီးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြီးသား, activated နေကြသည်။ ဒီတော့ပြီးသားအသံနှင့်ဗီဒီယို, ဓါတ်ပုံကိုမောက်စ်ဘီးလှန်လှောကြည့်, preview ကိုဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကို download လုပ်ပါ, နှင့်ပိုပြီးဒေါင်းလုပ်ပေါ်မှာ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျကို "ည" နဲ့တခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် HTML ကို5video player ကိုဓာတ်ပုံကြည့်ရှုသူများအသုံးပြုမှုကို enable နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ "အဖွဲ့ဝင်များ" tab ကိုမှလှည့်။ ဒီနေရာတွင်အမျိုးမျိုးသော sorting မျိုးနှင့်အခြားသူများလျှောက်ထားဖို့ပရိုဖိုင်းအတွက်ရာသီခွင်၏လက္ခဏာသက်သေတစ်ခုအရိပ်အယောင်ထည့်သွင်းရန်, သင်ကိုယ်ပွားကျော်ပျံဝဲသည့်အခါဓာတ်ပုံတစ်ပုံမျောအပါအဝင်အခြားအရောင်များမှမိတ်ဆွေရွေးချယ်ရေးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
သည် "အသိပေးချက်များ" ကိုမဖတ်ရသေးမက်ဆေ့ခ်ျ၏နောက်ခံအရောင်တစ်ခုအပြန်အလှန် "ပြန်မယ်" ခလုတ်ကို၏ထို့အပြင်ပြောင်းလဲစေနှင့်လုပ်မှာတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်နိုင်စွမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးမက်ဆေ့ခ်ျများ, etc delete
သည် "Interface ကို" ၌ဤလူမှုကွန်ယက်၏အမြင်အာရုံအစိတ်အပိုင်းကိုပြောင်းလဲဖို့အခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။ ဒီနေရာတွင်, ကြော်ငြာများ၏ဖယ်ရှားရေးကို enable အဆိုပါ panel ကိုနာရီခန့် ထား. , မီနူးပြန်စီနဲ့တခြားအမှုတို့ကိုပြုနိုင်ပါတယ်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖျက်မှုကိုဗွီဒီယိုနဲ့အသံထုတ်လုပ်ဖိုင်များကိုကယ်ဖို့က HTML5ကို အသုံးပြု. တစ်စစ်ဆေးမှုများမိတ်ဆွေများကိုစာရင်း updates များကိုပါဝင်နိုင်ပါသည် "ငြိမ်ဝပ်စွာနေ" ၌။
အတွက်သင် VKontakte သင်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုအပေါ်အသံစံကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ် "အသံ" ။
သည် "အားလုံး" tab မှာတစ်ခုတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်အထက်ပါ setting များအပေါငျးတို့သပါရှိသည်။
သင်အလိုရှိပါက "အကူအညီ" တွင်သင်သည်ငွေရေးကြေးရေး VkOpt စီမံကိန်းကိုပံ့ပိုးကူညီနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤဤ extension ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။
ထို့အပြင် site ၏ထိပ် VkOpt တစ်ဦးသည် frame extension ကိုလည်းမရှိ။ သင့်အကောင့် VKontakte ၏ဒီဇိုင်း Theme ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်, သင်သည် frame တစ်ခုမြှား၏ပုံစံအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုမဆိုခေါင်းစဉ်ကို select နှင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ နောက်ခံကိုပြောင်းလဲရန်, အကြောင်းအရာများအနက်တစ်ခုပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, site ကိုနောက်ခံပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
VKontakte extension ကိုထံမှလွှဲဗီဒီယိုများ VkOpt အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ installed ။ သငျသညျဗီဒီယိုတည်ရှိရာစာမျက်နှာကိုသွားပါလျှင်, "Download" ခလုတ်ကို၏အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
Next ကိုကျနော်တို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ရွေးချယ်ပါ။
ထို့နောကျကို browser က၎င်း၏စံနည်းလမ်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်စတင်ခဲ့သည်။
အောက်ကပုံတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်းဂီတကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ရုံတစ်ခု inverted တြိဂံ၏ပုံစံအတွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, Opera ကဘရောက်ဇာများအတွက်တိုးချဲ့ VkOpt လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte အပေါ်အချိန်အများကြီးဖြုန်းလိုသူတွေကိုတစ်ဦးကိုမှန်ကန် Boon ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်များအပြင်နောက်ထပ် features တွေနဲ့စွမ်းရည်တစ်စည်းစိမ်ကိုပေးစွမ်းသည်။
ဗီဒီယို Watch: Samsung Galaxy J7 SM-J710FN ဖနဗရင Android version Root လပနည 1000% (စက်တင်ဘာလ 2019).